2019 ခုနှစ် တရုတ် စစ်ရေးပြပွဲအတွင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သော သင်္ဘောဖျက် ဒုံးများနှင့် သင်္ဘောအခြေပြု လေ/ကာ ဒုံးကျည် စနစ်များ... - Khit Lunge
အမြိုးမြိုးသော ကမျးခွမှေ-သ‌ငျ်ဘော၊ သငျ်ဘောမှ-သငျ်ဘော ပဈခတျနိုငျတဲ့ YJ-12 နဲ့ YJ-18/18A မဈဆိုငျးမြားအပွငျ နောကျဆုံးပေါျ သငျ်ဘောအခွပွေု HHQ-9A လေ/ကာ စနဈတို့ကိုလညျး ထုတျဖောျပွသ ခဲ့ပါတယျ။ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ တညျထောငျခွငျး နှဈ 70 ပွည့ျ အထိမျးအမှတျအဖွဈ ရတေပျစဈဆငျရေး၏ ဖှဲ့စညျးသရုပျပွမှု မြားလညျး ပါဝငျပွသခဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။
YJ-12B : ပွပှဲအတှငျး ထုတျပွခဲ့တဲ့ YJ-12B ကမျးခွမှေ-သငျ်ဘောပဈ ဒုံးကညြျဟာ အလတျစားမှ အကွီးစား သငျ်ဘောမြားအထိ ပဈခတျတိုကျခိုကျနိုငျပွီး တရုတျရဲ့ ကမျးခွပေိုငျးဒသေ ကာကှယျရေးစနဈမြားမှာ အဓိက အရေးပါရာ ဖွဈလာပါလိမ့ျမယျ။ အဆင့ျမွှင့ျတငျထားတဲ့ YJ-12B အသံထကျမွနျ သငျ်ဘောဖကြျ ဒုံးကညြျဟာဆိုရငျ အမြားဆုံး ၃၁၀ မိုငျအထိ ရောကျရှိပဈခတျနိုငျပွီး တောငျတရုတျပငျလယျ ကြှနျးစုတှလေို နရောမြိုးတှမှော နရောခထြား နိုငျပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ မဈဆိုငျးဟာ အလတျတနျးစားကနေ အကွီးစား သငျ်ဘောမြားအထိ ပဈခတျ နှဈမွှုပျပဈနိုငျပွီး၊ နိုငျငံ၏ ရတေပျကာကှယျရေး လကျနကျစနဈမြားအတှငျး အရေးပါ အရာရောကျသော နရောကနေ တာဝနျထမျးဆောငျ နစေမှော ဖွဈပါတယျ။
YJ-12 ကတော့ ဝဟေငျ*လှှတျ သ‌ငျ်ဘောဖကြျ ခရု*ဈမဈဆိုငျး ဖွဈပွီး၊ တာလတျသှား မဟာဗြူဟာမွောကျ H-6K ဗုံးကွဲလယောဉျ ကွီးတှမှော တငျဆောငျပဈခတျ စပေါတယျ။ YJ-12 ဟာ အကှာအဝေး ကီလိုမီတာ ၄၀၀ အထိ ရောကျရှိပဈခတျနိုငျပွီး၊ Mach3အမွနျနှုနျးအထိ ပြံသနျးနိုငျပါတယျ။ ပဈမှတျသို့ ရောကျခါနီး၌ ရနျသူပဈခတျမှုအား အလှတျရုနျးမည့ျ စဈကစား လှုပျရှားမှုမြားကို ပွုလုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ 1990 ပွည့ျလှနျ ကာလတှမှော တရုတျဟာ YJ-12 ကို စတငျတီထှငျ ပွုလုပျ‌နခေဲ့ပွီး၊ 2000 ပွည့ျနှဈ ကြောျလောကျမှာ ဗုံးကွဲလယောဉျမြားတှငျ စတငျအသုံးခနြိုငျ ခဲ့ပါတယျ။ YJ-12 ဟာ ဝဟေငျ*လှှတျ မြိုးကှဲ ဖွဈပမေယျ့လညျး ပွညျပပို့မြိုးကှဲ CM-302 ကိုတော့ ရပွေငျ၊ မွပွေငျ၊ ဝဟေငျ platforms တို့ကနပေါ ပဈခတျနိုငျစပွေီး မွပွေငျတိုကျခိုကျရေး အတှကျပါ အသုံးခနြိုငျစမှော ဖွဈပါတယျ။
YJ-12 ဟာ ပစိဖိတျသမုဒ်ဒရာ အတှငျးမှာရှိတဲ့ အမရေိကနျ ရကွေောငျး တပျဖှဲ့မြားအပေါျ မွောကျမြားစှာသော လုံခွုံရေး ခွိမျးခွောကျမှုမြား ဖွဈပေါျစပွေီး၊ တရုတျထုတျခဲ့သမြှ သငျ်ဘောဖကြျ ဒုံးကညြျမြားထဲ၌ အန်တရာယျအရှိဆုံး အရာအဖွဈ သတျမှတျခွငျး ခံထားရပါတယျ။ အန်တရာယျဖွဈစတေဲ့ အကွောငျး အခကြျကတော့ YJ-12 ဟာ အလှနျလငြျမွနျတဲ့ Mach-3 အမွနျနှုနျးနဲ့ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ အထိ သှားရောကျ နိုငျသောကွောင့ျ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ အမရေိကနျ လယေဉျတငျ သငျ်ဘောအုပျစုကို ကာကှယျပေးနတေဲ့ Aegis နဲ့ SM-2 စနဈမြားကို ရှာဖှထေောကျလှမျး ပဈခနြိုငျဖို့ ခကျခဲသှားစပေါတယျ။ YJ-12 မဈဆိုငျးဟာ ၎င်းငျးတို့ ထောကျလှမျးပဈခတျနိုငျတဲ့ အကှာအဝေး အလှနျကနေ ပဈလှှတျနိုငျတဲ့အတှကျ အမရေိကနျ ရတေပျရဲ့ တုံ့ပွနျခြိနျကို အတောျလေး လြော့နညျး သှားစပေါတယျ။ YJ-12 ကို ကာဆီးဖို့ ပိုမိုခကျခဲ သှားစတောကတော့ နောကျဆုံး ကာကှယျရေးစနဈမြားကို ကြောျဖွတျမယ့ျ မှလေိမျမှကေောကျ လုပျကစားမှုပဲ ဖွဈပါတယျ။ တရုတျရဲ့ Flankers တိုကျလယောဉျ တှနေဲ့သာ ပေါငျးစပျလိုကျမယျ ဆိုရငျ YJ-12 ရဲ့ ရောကျရှိနိုငျမှုဟာ ကီလိုမီတာ ၁၉၀၀ အထိ တိုးမွင့ျသှားနိုငျပွီး DF-21D ASBM တှထေကျတောငျ အန်တရာယျ ပိုကွီးသှားစေ ပါတယျ။ YJ-12 ကို အသုံးခလြာမှုနဲ့ ဆကျစပျ သငျ်ဘောဖကြျခရု(ဈ) ဒုံးကညြျမြား တီထှငျထုတျလုပျမှုမြားကို ကွည့ျခွငျးအားဖွင့ျ တရုတျဟာ အနာဂါတျမှာ ဖွဈပေါျလာနိုငျတဲ့ ပဋိပက်ခမြားအတှကျ A2/AD ရရှိရနျ ကွိုးပမျးနတောကို တှေ့ရှိရပါတယျ။
YJ-18 & YJ-18A : YJ-18 နဲ့ YJ-18A မဈဆိုငျးတှကေတော့ တရုတျရဲ့ နောကျဆုံးပေါျ သငျ်ဘောဖကြျ ခရု(ဈ)ဒုံးကညြျ မြားပဲဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ကို ပထမဆုံး အကွိမျအဖွဈ ထုတျဖောျပွသခဲ့ခွငျး ဖွဈပွီး၊ သငျ်ဘောမြား ရငေုပျသငျ်ဘောမြားကနေ ပဈခတျနိုငျစပေါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ကို တရုတျရဲ့ ရတေပျစဈဆငျရေး လြှို့ဝှကျ လကျနကျမြားအဖွဈ ဖေါျပွခဲ့ကွပွီး ဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးမဈဆိုငျး နှဈမြိုးအား ဒေါငျလိုကျအနအေထားဖွင့ျ ပဈခတျ နိုငျစမှောဖွဈပွီး၊ အသံထကျသုံးဆ အမွနျနှုနျးနဲ့ သှားရောကျပြံသနျးမှာ ဖွဈပါတယျ။ YJ ဆိုတာဟာ တရုတျအဓိပ်ပါယျ ‘Eagle Strike’ ရဲ့ အတိုကောကျကို ရညျညှှနျးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
YJ-18 ဟာ ဒေါငျလိုကျပဈခတျနိုငျတဲ့ သငျ်ဘောဖကြျ ခရု(ဈ) ဒုံးကညြျ အမြိုးအစားဖွဈပွီး၊ Mach3အမွနျနှုနျးဖွင့ျ ပြံသနျးနိုငျကာ၊ အကှာဝေး ကီလိုမီတာ ၅၄၀ အထိ ရောကျရှိနိုငျပါတယျ။ YJ-18 အား ပေါကျအားပွငျး HE ယမျးဘီလူး ထိပျဖူး 300 kg အထိ ထည့ျသှငျးတပျဆငျ ပေးထားပွီး၊ ဖကြျသငျ်ဘော အရှယျအစားလောကျအား နှဈမွုပျပဈနိုငျကာ၊ လယောဥျတငျသငျ်ဘော အရှယျလောကျအား ဆိုးဆိုးရှားရှား ပကြျဆီးသှားစနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ PLA ရတေပျဖှဲ့ဟာ YJ-18 မြားကို ၎င်းငျးတို့ရဲ့ Luyang III DDG နှင့ျ Type 055 CG စဈသငျ်ဘောမြား၊ Song-, Yuan-, နဲ့ Shang- အတနျးစား တိုကျခိုကျရေး ရငေုပျသငျ်ဘောမြားမှာ တပျဆငျအသုံးခြ ထားပါတယျ။
YJ-18 ရဲ့ ပဈမှတျသို့ ရောကျခါနီးအထိ အသံထကျ လြှငျမွနျအောငျ အရှိနျတငျနိုငျမှုကွောင့ျ ခုခံစဈသငျ်ဘော၏ စကျအ‌မွောကျမြားနှင့ျ ပဈခနြိုငျရနျ ခကျခဲသှားစမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒီ ASCM ဒုံးကညြျမြားဟာ တရုတျစဈသငျ်ဘောမြားကို stand-off အကှာအဝေး ပိုမိုတိုးမွင့ျစပွေီး ၎င်းငျးတို့ရဲ့ (A2/AD) စှမျးရညျကို အထောကျအပံ့ ပွုစမှောပဲ ဖွဈပါတယျ။ တရုတျရဲ့ (A2/AD) စှမျးရညျဟာ… အကယျ၍ အနောကျပစိဖိတျ သမုဒ်ဒရာထဲ ပဋိပက်ခဖွဈလာပွီဆိုပါက အရေးပါလာမှာဖွဈပွီး၊ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ သငျ်ဘောဖကြျ ခရု(ဈ)ဒုံးကညြျနဲ့ ဘလဈစတဈ ဒုံးကညြျမြား တိုးပှါးမြားပွား လာစမှောပဲ ဖွဈပါတယျ။
HHQ 9B : HQ-9 ဟာ တာဝေးသှား SAM ဒုံးကညြျ တဈမြိုးဖွဈပွီး၊ အမြိုးမြိုးသော လကွေောငျး ပဈမှတျမြားဖွဈသည့ျ အသံထကျမွနျ လယောဉျမြား၊ ရဟတျယာဉျမြား၊ ခရု(ဈ) ဒုံးကညြျမြားနှင့ျ မောငျးသူမဲ့ ယာဉျပြံမြားကို ခုခံတိုကျခိုကျနိုငျဖို့ ရညျရှယျထုတျလုပျထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။ တရုတျကာကှယျရေး နညျးပညာ အကယျဒမီမှ ဒီဇိုငျးထုတျထားခွငျးဖွဈပွီး၊ အကှာဝေး 200 km အမွင့ျ မီတာ 30,000 အထိ ပဈမှတျမြားကို ပဈခတျတိုကျခိုကျနိုငျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ HQ-9 အား မွပွေငျအခွပွေု ရှှေ့လြားသှားလာနိုငျသော လေ/ကာစနဈ HQ-9A အဖွဈ အသုံးခလြကြျရှိပွီး၊ ရတေပျသုံး မြိုးကှဲကိုလညျး စဈသငျ်ဘောမြားပေါျသို့ တပျဆငျအသုံးခလြကြျ ရှိနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
HQ-9B (ဝါ) HHQ-9B ကတော့ အသဈထှကျရှိလာတဲ့ ဒေါငျလိုကျပဈခတျနိုငျသော တာဝေးသှား မွပွေငျ-ဝဟေငျပဈ မဈဆိုငျး စနဈသဈပဲ ဖွဈပါတယျ။ တရုတျပွညျသူ့ လှတျမွောကျရေးတပျမတောျ (PLA) အတှကျ တီထှငျထားခွငျးဖွဈပွီး၊ လကွေောငျးပဈမှတျမြားကို ကီလိုမီတာ ၂၅၀ အထိ ပဈခတျနိုငျအောငျ ဒီဇိုငျးဆှဲ ထုတျလုပျထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။ Type 052C ဖကြျသငျ်ဘောမြားတှငျ တပျဆငျပေးထားသည့ျ HHQ-9A မဈဆိုငျးစနဈမြား၌ Cell (၆) ခုပါ VLS စနဈ (၈) ခု ပါဝငျတပျဆငျ ပေးထားပွီး၊ ရှေ့တှငျခွောကျခု နောကျတှငျနှဈခု နရောခြ‌ပေး ထားပါတယျ။
တရုတျတို့ရဲ့ VLS ဒီဇိုငျးကတော့ ဆလငျဒါ ပုံသဏ်ဍာနျရှိပွီး “cold launch” စနဈကို သုံးပါတယျ။ ယှဉျပွရမယျဆိုရငျတော့… အနောကျတိုငျး VLS ပုံစံတှဖွေဈတဲ့ Mk-41 & Sylver တို့မှာဆိုရငျ ‌လေးထောင့ျ ပုံသဏ်ဍာနျရှိပွီး “hot launch” စနဈ သုံးထားတာကို တှေ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ထိုနှဈခုရဲ့ အဓိက ခွားနားခကြျကတော့ ရော့ကဒျမောျတာ အတှငျးလောငျ* နှင့ျ အပွငျလောငျ* ကှဲပွားသှားခွငျး ဖွဈပါတယျ။
HQ-9 လှှတျစငျတဈခုမှာ ဆိုရငျတော့ သီးခွား ကှနျတိနျနာ တဈခုစီဖွင့ျ ထည့ျသှငျးထားသည့ျ မဈဆိုငျးလေးလုံးစီ ပါဝငျပွီး၊ လှုပျရှားရှေ့လြားမှုကောငျးသည့ျ Taian TA5380 8×8 ယာဉျမြားဖွင့ျ တပျဆငျတငျဆောငျ ပေးထားပါတယျ။ HQ-9 ၏ ပုံမှနျ စတနျးဒတျ HT-233 engagement radar ဖွင့ျ ပဈမှတျ (၁၀၀) အထိ ခွရောဖမျးနိုငျပွီး၊ ပဈမှတျ (၅၀) အား ကီလိုမီတာ တဈရာအထိ ပဈခတျဖကြျဆီးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ PLA တပျဖှဲ့မြား၏ ပုံမှနျ HQ-9 battery တဈစု၌… အမိန့ျပေးယာဥျတဈစီး၊ ထိနျးခြုပျရေးယာဉျ (၆) စီး၊ ပဈမှတျခြိနျရဒေါယာဉျ (၆) စီး၊ ရှာဖှရေေးရဒေါယာဉျ (၆) စီး၊ မဈဆိုငျးပဈလှှတျယာဉျ (၄၈) စီးနှင့ျ မဈဆိုငျး (၁၉၂) လုံးတို့ ပါဝငျကွ ပါတယျ။ HQ-9 ဟာ အမြိုးမြိုးသော ရဒေါ ဆငျဆာ စနဈမြားကို အသုံးပွုပွီး မတူကှဲပွားသော ပဈမှတျမြားဖွဈသညျ့ ဘလဈစတဈ မဈဆိုငျးမြား၊ စတဲ့လျသျ ဂုဏျသတ်တိရှိ ယာဉျအမြိုးမြိုးတို့ကို ထောကျလှမျးသိရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ Battery တဈစုတှငျ HT-233 ကိုငျတှယျတိုကျခိုကျရေး ရဒေါမြား၊ ရှေ့လြား သှားလာနိုငျသော H-200 ကိုငျတှယျတိုကျခိုကျရေး ရဒေါမြား၊ မွောကျမြားစှာသော အနိမ့ျဖမျး Type 120 low altitude acquisition radar မြား၊ Type 305A 3D acquisition radar မြား (သို့) Type 305B 3D acquisition radar မြားလညျး ပါဝငျလာနိုငျ ပါတယျ။
Translated Article Via Strategic Journal F.B. Page by Aung Ko Ko Htoo.
အမျိုးမျိုးသော ကမ်းခြေမှ-သ‌င်္ဘော၊ သင်္ဘောမှ-သင်္ဘော ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ YJ-12 နဲ့ YJ-18/18A မစ်ဆိုင်းများအပြင် နောက်ဆုံးပေါ် သင်္ဘောအခြေပြု HHQ-9A လေ/ကာ စနစ်တို့ကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြသ ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် 70 ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရေတပ်စစ်ဆင်ရေး၏ ဖွဲ့စည်းသရုပ်ပြမှု များလည်း ပါဝင်ပြသခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
YJ-12B : ပြပွဲအတွင်း ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ YJ-12B ကမ်းခြေမှ-သင်္ဘောပစ် ဒုံးကျည်ဟာ အလတ်စားမှ အကြီးစား သင်္ဘောများအထိ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး တရုတ်ရဲ့ ကမ်းခြေပိုင်းဒေသ ကာကွယ်ရေးစနစ်များမှာ အဓိက အရေးပါရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ YJ-12B အသံထက်မြန် သင်္ဘောဖျက် ဒုံးကျည်ဟာဆိုရင် အများဆုံး ၃၁၀ မိုင်အထိ ရောက်ရှိပစ်ခတ်နိုင်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ် ကျွန်းစုတွေလို နေရာမျိုးတွေမှာ နေရာချထား နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့ မစ်ဆိုင်းဟာ အလတ်တန်းစားကနေ အကြီးစား သင်္ဘောများအထိ ပစ်ခတ် နှစ်မြှုပ်ပစ်နိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံ၏ ရေတပ်ကာကွယ်ရေး လက်နက်စနစ်များအတွင်း အရေးပါ အရာရောက်သော နေရာကနေ တာဝန်ထမ်းဆောင် နေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
YJ-12 ကတော့ ဝေဟင်*လွှတ် သ‌င်္ဘောဖျက် ခရု*စ်မစ်ဆိုင်း ဖြစ်ပြီး၊ တာလတ်သွား မဟာဗျူဟာမြောက် H-6K ဗုံးကြဲလေယာဉ် ကြီးတွေမှာ တင်ဆောင်ပစ်ခတ် စေပါတယ်။ YJ-12 ဟာ အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ ၄၀၀ အထိ ရောက်ရှိပစ်ခတ်နိုင်ပြီး၊ Mach3အမြန်နှုန်းအထိ ပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်သို့ ရောက်ခါနီး၌ ရန်သူပစ်ခတ်မှုအား အလွတ်ရုန်းမည့် စစ်ကစား လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 1990 ပြည့်လွန် ကာလတွေမှာ တရုတ်ဟာ YJ-12 ကို စတင်တီထွင် ပြုလုပ်‌နေခဲ့ပြီး၊ 2000 ပြည့်နှစ် ကျော်လောက်မှာ ဗုံးကြဲလေယာဉ်များတွင် စတင်အသုံးချနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ YJ-12 ဟာ ဝေဟင်*လွှတ် မျိုးကွဲ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ပြည်ပပို့မျိုးကွဲ CM-302 ကိုတော့ ရေပြင်၊ မြေပြင်၊ ဝေဟင် platforms တို့ကနေပါ ပစ်ခတ်နိုင်စေပြီး မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေး အတွက်ပါ အသုံးချနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
YJ-12 ဟာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အတွင်းမှာရှိတဲ့ အမေရိကန် ရေကြောင်း တပ်ဖွဲ့များအပေါ် မြောက်များစွာသော လုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ တရုတ်ထုတ်ခဲ့သမျှ သင်္ဘောဖျက် ဒုံးကျည်များထဲ၌ အန္တရာယ်အရှိဆုံး အရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရပါတယ်။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်း အချက်ကတော့ YJ-12 ဟာ အလွန်လျင်မြန်တဲ့ Mach-3 အမြန်နှုန်းနဲ့ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ အထိ သွားရောက် နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမေရိကန် လေယဉ်တင် သင်္ဘောအုပ်စုကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ Aegis နဲ့ SM-2 စနစ်များကို ရှာဖွေထောက်လှမ်း ပစ်ချနိုင်ဖို့ ခက်ခဲသွားစေပါတယ်။ YJ-12 မစ်ဆိုင်းဟာ ၎င်းတို့ ထောက်လှမ်းပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ အကွာအဝေး အလွန်ကနေ ပစ်လွှတ်နိုင်တဲ့အတွက် အမေရိကန် ရေတပ်ရဲ့ တုံ့ပြန်ချိန်ကို အတော်လေး လျော့နည်း သွားစေပါတယ်။ YJ-12 ကို ကာဆီးဖို့ ပိုမိုခက်ခဲ သွားစေတာကတော့ နောက်ဆုံး ကာကွယ်ရေးစနစ်များကို ကျော်ဖြတ်မယ့် မွေလိမ်မွေကောက် လုပ်ကစားမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ Flankers တိုက်လေယာဉ် တွေနဲ့သာ ပေါင်းစပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် YJ-12 ရဲ့ ရောက်ရှိနိုင်မှုဟာ ကီလိုမီတာ ၁၉၀၀ အထိ တိုးမြင့်သွားနိုင်ပြီး DF-21D ASBM တွေထက်တောင် အန္တရာယ် ပိုကြီးသွားစေ ပါတယ်။ YJ-12 ကို အသုံးချလာမှုနဲ့ ဆက်စပ် သင်္ဘောဖျက်ခရု(စ်) ဒုံးကျည်များ တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တရုတ်ဟာ အနာဂါတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ပဋိပက္ခများအတွက် A2/AD ရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
YJ-18 & YJ-18A : YJ-18 နဲ့ YJ-18A မစ်ဆိုင်းတွေကတော့ တရုတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် သင်္ဘောဖျက် ခရု(စ်)ဒုံးကျည် များပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ သင်္ဘောများ ရေငုပ်သင်္ဘောများကနေ ပစ်ခတ်နိုင်စေပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို တရုတ်ရဲ့ ရေတပ်စစ်ဆင်ရေး လျှို့ဝှက် လက်နက်များအဖြစ် ဖေါ်ပြခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမစ်ဆိုင်း နှစ်မျိုးအား ဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြင့် ပစ်ခတ် နိုင်စေမှာဖြစ်ပြီး၊ အသံထက်သုံးဆ အမြန်နှုန်းနဲ့ သွားရောက်ပျံသန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ YJ ဆိုတာဟာ တရုတ်အဓိပ္ပါယ် ‘Eagle Strike’ ရဲ့ အတိုကောက်ကို ရည်ညွှန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
YJ-18 ဟာ ဒေါင်လိုက်ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ သင်္ဘောဖျက် ခရု(စ်) ဒုံးကျည် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ Mach3အမြန်နှုန်းဖြင့် ပျံသန်းနိုင်ကာ၊ အကွာဝေး ကီလိုမီတာ ၅၄၀ အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ YJ-18 အား ပေါက်အားပြင်း HE ယမ်းဘီလူး ထိပ်ဖူး 300 kg အထိ ထည့်သွင်းတပ်ဆင် ပေးထားပြီး၊ ဖျက်သင်္ဘော အရွယ်အစားလောက်အား နှစ်မြုပ်ပစ်နိုင်ကာ၊ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော အရွယ်လောက်အား ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်ဆီးသွားစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ PLA ရေတပ်ဖွဲ့ဟာ YJ-18 များကို ၎င်းတို့ရဲ့ Luyang III DDG နှင့် Type 055 CG စစ်သင်္ဘောများ၊ Song-, Yuan-, နဲ့ Shang- အတန်းစား တိုက်ခိုက်ရေး ရေငုပ်သင်္ဘောများမှာ တပ်ဆင်အသုံးချ ထားပါတယ်။
YJ-18 ရဲ့ ပစ်မှတ်သို့ ရောက်ခါနီးအထိ အသံထက် လျှင်မြန်အောင် အရှိန်တင်နိုင်မှုကြောင့် ခုခံစစ်သင်္ဘော၏ စက်အ‌မြောက်များနှင့် ပစ်ချနိုင်ရန် ခက်ခဲသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ASCM ဒုံးကျည်များဟာ တရုတ်စစ်သင်္ဘောများကို stand-off အကွာအဝေး ပိုမိုတိုးမြင့်စေပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ (A2/AD) စွမ်းရည်ကို အထောက်အပံ့ ပြုစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ (A2/AD) စွမ်းရည်ဟာ… အကယ်၍ အနောက်ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာထဲ ပဋိပက္ခဖြစ်လာပြီဆိုပါက အရေးပါလာမှာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ရဲ့ သင်္ဘောဖျက် ခရု(စ်)ဒုံးကျည်နဲ့ ဘလစ်စတစ် ဒုံးကျည်များ တိုးပွါးများပြား လာစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
HHQ 9B : HQ-9 ဟာ တာဝေးသွား SAM ဒုံးကျည် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးမျိုးသော လေကြောင်း ပစ်မှတ်များဖြစ်သည့် အသံထက်မြန် လေယာဉ်များ၊ ရဟတ်ယာဉ်များ၊ ခရု(စ်) ဒုံးကျည်များနှင့် မောင်းသူမဲ့ ယာဉ်ပျံများကို ခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ကာကွယ်ရေး နည်းပညာ အကယ်ဒမီမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အကွာဝေး 200 km အမြင့် မီတာ 30,000 အထိ ပစ်မှတ်များကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ HQ-9 အား မြေပြင်အခြေပြု ရွှေ့လျားသွားလာနိုင်သော လေ/ကာစနစ် HQ-9A အဖြစ် အသုံးချလျက်ရှိပြီး၊ ရေတပ်သုံး မျိုးကွဲကိုလည်း စစ်သင်္ဘောများပေါ်သို့ တပ်ဆင်အသုံးချလျက် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
HQ-9B (ဝါ) HHQ-9B ကတော့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ဒေါင်လိုက်ပစ်ခတ်နိုင်သော တာဝေးသွား မြေပြင်-ဝေဟင်ပစ် မစ်ဆိုင်း စနစ်သစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PLA) အတွက် တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လေကြောင်းပစ်မှတ်များကို ကီလိုမီတာ ၂၅၀ အထိ ပစ်ခတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆွဲ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Type 052C ဖျက်သင်္ဘောများတွင် တပ်ဆင်ပေးထားသည့် HHQ-9A မစ်ဆိုင်းစနစ်များ၌ Cell (၆) ခုပါ VLS စနစ် (၈) ခု ပါဝင်တပ်ဆင် ပေးထားပြီး၊ ရှေ့တွင်ခြောက်ခု နောက်တွင်နှစ်ခု နေရာချ‌ပေး ထားပါတယ်။
တရုတ်တို့ရဲ့ VLS ဒီဇိုင်းကတော့ ဆလင်ဒါ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး “cold launch” စနစ်ကို သုံးပါတယ်။ ယှဉ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့… အနောက်တိုင်း VLS ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့ Mk-41 & Sylver တို့မှာဆိုရင် ‌လေးထောင့် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး “hot launch” စနစ် သုံးထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနှစ်ခုရဲ့ အဓိက ခြားနားချက်ကတော့ ရော့ကဒ်မော်တာ အတွင်းလောင်* နှင့် အပြင်လောင်* ကွဲပြားသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
HQ-9 လွှတ်စင်တစ်ခုမှာ ဆိုရင်တော့ သီးခြား ကွန်တိန်နာ တစ်ခုစီဖြင့် ထည့်သွင်းထားသည့် မစ်ဆိုင်းလေးလုံးစီ ပါဝင်ပြီး၊ လှုပ်ရှားရွေ့လျားမှုကောင်းသည့် Taian TA5380 8×8 ယာဉ်များဖြင့် တပ်ဆင်တင်ဆောင် ပေးထားပါတယ်။ HQ-9 ၏ ပုံမှန် စတန်းဒတ် HT-233 engagement radar ဖြင့် ပစ်မှတ် (၁၀၀) အထိ ခြေရာဖမ်းနိုင်ပြီး၊ ပစ်မှတ် (၅၀) အား ကီလိုမီတာ တစ်ရာအထိ ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ PLA တပ်ဖွဲ့များ၏ ပုံမှန် HQ-9 battery တစ်စု၌… အမိန့်ပေးယာဉ်တစ်စီး၊ ထိန်းချုပ်ရေးယာဉ် (၆) စီး၊ ပစ်မှတ်ချိန်ရေဒါယာဉ် (၆) စီး၊ ရှာဖွေရေးရေဒါယာဉ် (၆) စီး၊ မစ်ဆိုင်းပစ်လွှတ်ယာဉ် (၄၈) စီးနှင့် မစ်ဆိုင်း (၁၉၂) လုံးတို့ ပါဝင်ကြ ပါတယ်။ HQ-9 ဟာ အမျိုးမျိုးသော ရေဒါ ဆင်ဆာ စနစ်များကို အသုံးပြုပြီး မတူကွဲပြားသော ပစ်မှတ်များဖြစ်သည့် ဘလစ်စတစ် မစ်ဆိုင်းများ၊ စတဲ့လ်သ် ဂုဏ်သတ္တိရှိ ယာဉ်အမျိုးမျိုးတို့ကို ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Battery တစ်စုတွင် HT-233 ကိုင်တွယ်တိုက်ခိုက်ရေး ရေဒါများ၊ ရွေ့လျား သွားလာနိုင်သော H-200 ကိုင်တွယ်တိုက်ခိုက်ရေး ရေဒါများ၊ မြောက်များစွာသော အနိမ့်ဖမ်း Type 120 low altitude acquisition radar များ၊ Type 305A 3D acquisition radar များ (သို့) Type 305B 3D acquisition radar များလည်း ပါဝင်လာနိုင် ပါတယ်။